အပိုလို ၈ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၅:၀၉၊ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ နေ့က Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) တည်းဖြတ်သည့်မူ
အပိုလို ၈ ၏အဖွဲ့သားများသည် ကမ္ဘာမြေထွက်လာပုံကို မျက်မြင်သက်သေများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်။
CSM: ၂၈,၈၇၀ ကီလိုဂရမ် (၆၃,၆၅၀ ပေါင်)
CM:၅,၆၂၁ ကီလိုဂရမ် (၁၂,၃၉၂ ပေါင်)
SM:၂၃,၂၅၀ ကီလိုဂရမ် (၅၁,၂၅၈ ပေါင်)
LTA: ၉,၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၁၉,၉၀၀ ပေါင်)
၄,၉၇၉ ကီလိုဂရမ် (၁၀,၉၇၇ ပေါင်)
၁၁၀.၆ ကီလိုမီတာ (၅၉.၇ ရေမိုင်)
၁၁၂.၄ ကီလိုမီတာ (၆၀.၇ ရေမိုင်)
ဝဲယာသို့: Lovell, Anders, Borman
← အပိုလို ၇ အပိုလို ၉ →
အပိုလို ၈ သည် အမေရိကန်၏ အပိုလိုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယမြောက် လူသားလိုက်ပါသော အာကာသပျံသန်းရေးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှ စွန့်ခွာ၍ လပတ်လမ်းသို့ ရောက်ရှိသည့် လူသားလိုက်ပါသော ပထမဆုံး အာကာသယာဉ်ဖြစ်သည်။ အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦး ကွန်မန်ဒါ ဖရန့် ဘော်မန်း၊ ကွပ်ကဲ မောင်းနှင်ရေးမှူး ဂျိမ်း လော်ဗယ်၊ ဝီလီယံ အန်ဒါတို့သည် ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြာင်းမှ စွန့်ခွာသော ပထမဆုံးလူသား၊ ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးသူ၊ ကမ္ဘာမြေထွက်မှုကို မျက်မြင်သက်သေမြင်ဖူးသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အပိုလို ၈ သည် လကမ္ဘာသို့ ၈ ရက်ခရီးနှင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် နာရီ ၂၀ ကြာ ၁၀ ပတ် လကမ္ဘာအား ပတ်ခဲ့သည်။ အပိုလို တီဗွီကင်မရာမှ ရုပ်သံလွှင့်ခဲ့ရာ ယင်းအချိန်အခါက လူကြည့်များခဲ့သည်။ အပိုလို ၈ အာကာသယာဉ်မှူးများသည် ကမ္ဘာမြေသို့ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ တွင် ပစိတ်ဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ ပြန်လည်ဆင်းက်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သားများသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်အတွက် နာမည်ကြီး Time မဂ္ဂဇင်း၏ "Men of the Year" ကင်ပွန်းတပ်ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
↑ Orloff၊ Richard W. (September 2004) [First published 2000]။ "Table of Contents"။ Apollo by the Numbers: A Statistical Reference။ NASA History Division, Office of Policy and Plans။ NASA History Series။ Washington, D.C.: NASA။ ISBN 0-16-050631-X။ LCCN 00061677။ NASA SP-2000-4029။ June 28, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apollo 8 Press Kit (PDF) 33–34။ NASA (December 15, 1968)။ June 28, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ – The spacecraft mass at launch includes the CM and SM, but excludes the ၄,၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၈,၉၀၀ ပေါင်) Launch Escape System (LES), which was discarded before reaching Earth orbit.
↑ Apollo 8 Mission Report (PDF)။ NASA (February 1969)။ June 28, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ – The mass for LTA-B was less than that ofaflying LM, because it was essentiallyaboilerplate decent stage. A fully loaded, flight-ready LM, like the Eagle from Apollo 11, hadamass of ၁၅,၀၉၅ ကီလိုဂရမ် (၃၃,၂၇၈ ပေါင်), including propellants.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Apollo 8 Mission Report (PDF)။ NASA (February 1969)။ June 28, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apollo 8 Mission Report (PDF)။ NASA (February 1969)။ May 8, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၈&oldid=350932" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇၊ ၁၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။